Carewell प्रशिक्षण अवलोकन | Carewell SEIU 503
तपाईंको Carewell प्रशिक्षणमा स्वागत छ
केयरवेल एसआईयू 3०3 तालिमले होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूलाई उत्कृष्ट प्रशिक्षणको साथ प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई उपकरण र आत्मविश्वासबाट सुसज्जित बनाउन सक्छ जुन तपाईंले आफ्नो उपभोक्तालाई सबैभन्दा प्रभावकारी — र सुरक्षित - सावधानीपूर्वक हेरचाह गर्न र समर्थन दिन सक्नुहुनेछ।
केयरवेल SEIU 503 प्रशिक्षण टोली वयस्क वयस्कहरू र शारीरिक, बौद्धिक, वा विकास अशक्त मानिसहरूसँग घर-घर समर्थन प्रदान गर्ने हेरचाह गर्नेहरूलाई प्रशिक्षण र विकास गर्न समर्पित छ। एकसाथ, यी तालिमहरूले उपकरण र दक्षताहरू तपाईंलाई एक सेवा प्रदायकको रूपमा आवश्यक काम प्रदान गर्दछ तपाईंको काममा तपाईंको सुरक्षा, साथै तपाईंको उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न।
कसको लागि प्रशिक्षण छ?
सबै नयाँ होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूले नयाँ वर्कर प्रशिक्षण लिन आवश्यक छ।
वर्तमान होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूले ताजा तालिम लिन आवश्यक हुनेछ।
त्यहाँ केहि अपवाद छन् जो प्रशिक्षण लिन आवश्यक छ। थप जानकारीको लागि प्रशिक्षण FAQ हरू हेर्नुहोस्।
यो तीन-अंश प्रशिक्षणले तपाईंलाई होमकेयर वा व्यक्तिगत समर्थन कार्यकर्ताको रूपमा तपाईंको नयाँ भूमिकाको बारेमा सिक्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई उपभोक्तालाई सुरक्षित, उच्च-गुणवत्ता सेवाहरू प्रदान गर्न तपाईंलाई परिचय दिन्छ।
रिफ्रेसर प्रशिक्षणले तपाईंलाई उत्तम अभ्यासहरूमा अप टु डेट रहन मद्दत गर्दछ, र सह-देखभाल प्रदायकहरूसँग तपाईंको आफ्नै कामकाजमा साझेदारी साझा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
निरन्तर शिक्षा कोर्सहरूले विभिन्न विषयहरूको कभर गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो प्रशिक्षण आवश्यकताहरू पूरा गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं समयको साथ आफ्नो क्यारियरको विकास गर्नुहुन्छ।
नयाँ श्रमिक अभिमुखीकरण
के तपाइँ सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ? आज दर्ता गर्न क्यायरवेल लर्निंग पोर्टलमा जानुहोस्!
कृपया पंजीकरण पृष्ठको साथ सहयोगका लागि यो गाईड हेर्नुहोस् यदि तपाईको रूचाइएको भाषा अंग्रेजी हैन भने।
वर्तमान श्रमिक ताजा प्रशिक्षण
के तपाई हालको कामदार हुनुहुन्छ? रिफ्रेसर प्रशिक्षणको लागि दर्ता गर्न तल क्लिक गर्नुहोस्।
शीर्षक प्रशिक्षणमा कभर
Carewell SEIU 503 को अन्तर्क्रियात्मक प्रशिक्षण सबै फरक पृष्ठभूमिबाट वयस्क शिक्षार्थीहरूसँग संलग्न हुन डिजाइन गरिएको हो।
प्रशिक्षणमा समावेश गरिएका केहि शीर्षकहरू:
उपभोक्ता अधिकार र गोपनीयता
नियम, नियम, र कसरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने
दुरुपयोग र उपेक्षा रोक्न
व्यावसायिक विकास विकल्पहरू
व्यक्ति केन्द्रित दर्शन
हेरचाह प्रदायक सुरक्षा
स्वस्थ स्वच्छता अभ्यास प्रमोट गर्दै
शारीरिक र भावनात्मक कल्याण
प्रशिक्षण को शैली
Carewell SEIU 503 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू दुबै व्यक्तिगत र अनलाइन प्रदान गरिनेछ।
Carewell SEIU 503 प्रशिक्षण ओरेगोन भर मा व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। तपाईंले दर्ता गरे पछि केरवेल लर्निंग पोर्टलमा तपाईंको नजिक प्रशिक्षण सत्रहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। केयरवेल SEIU 503 प्रशिक्षण टीम सबै ओरेगन होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूको लागि प्रशिक्षण पहुँचयोग्य बनाउन समर्पित छ, त्यसैले धेरै जसो प्रदायकहरूले प्रशिक्षण स्थानमा पुग्न 30० माईलभन्दा बढी यात्रा गर्नु पर्दैन।
प्रशिक्षणको लागि तपाईसँग स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, वा ल्यापटप ल्याउनु पर्छ। यदि तपाईंसँग यी मध्ये एउटा पनि छैन भने, Carewell SEIU 503 प्रशिक्षण टोलीसँग पहिलो आउने पहिलो सेवाको आधारमा devicesण लिन केही उपकरणहरू उपलब्ध हुनेछन्। तपाईंले उपकरणको प्रयोग प्रशिक्षणको केही भागहरू जस्तै ज्ञान जाँचहरूको लागि पूरा गर्न आवश्यक पर्दछ।
के तपाईसँग अंग्रेजी भन्दा अन्य एक मन पराइएको भाषा छ? हामी यहाँ मद्दत गर्न आएका छौं। हामी तपाइँलाई प्रशिक्षणको लागि सामिल हुन एक दोभाषे तालिका बनाउन सक्छौं। कल गर्नुहोस् वा हामीलाई तपाईंको भाषा-सम्बन्धित अनुरोधको साथ ईमेल गर्नुहोस्। हामी चाँडै नै अरबी, स्पेनिश, रूसी, भियतनामी, मन्डारिन (भ्वाइस ओभर), र सरलीकृत चिनियाँ (लिखित) मा आयोजित प्रशिक्षण सत्रहरू प्रदान गर्नेछौं।
तपाईंको उपभोक्ताको लागि वैकल्पिक हेरचाह
यदि तपाईं आफ्नो उपभोक्तासँग नियमित रूपमा निर्धारित घण्टाको अवधिमा प्रशिक्षणमा भाग लिइरहनुभएको छ भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको उपभोक्ता वा केस प्रबन्धकलाई उनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि उनीहरूले वैकल्पिक हेरचाह पाउन सक्छन्।
केहि आवश्यक प्रशिक्षण अनलाइन हुनेछ। प्रशिक्षण पहुँच गर्न, तपाईंले Carewell लर्निंग पोर्टल भ्रमण गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ, तपाइँ पाठ्यक्रमहरू, पूर्ण प्रशिक्षण मोड्युलहरूको लागि दर्ता गर्नुहुनेछ, र छलफल बोर्डहरू मार्फत प्रशिक्षकहरू र अन्य हेरचाह प्रदायकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ।
तपाईंले सुरु गर्न केयरवेल लर्निंग पोर्टलमा प्रोफाइल सिर्जना गर्नु आवश्यक पर्दछ। यो गर्न तपाईलाई वैध ईमेल ठेगाना चाहिन्छ। तपाईं कुनै स्मार्टफोनबाट इन्टरनेट पहुँचको साथ पोर्टलमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, वा कम्प्युटर। यदि तपाईं स्मार्टफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने डाटाको ठूलो मात्रा प्रयोग गर्नबाट बच्न वाइफाइमा जडान गर्नुहोस्।
हाम्रो Carewell SEIU 3०3 प्रशिक्षण पंजीकरण र प्रयोगकर्ता गाइड डाउनलोड गर्नुहोस् चरण-दर-चरण निर्देशनहरू केयरवेल लर्निंग पोर्टलमा पंजीकरण गर्नका लागि।
Carewell SEIU 3० Reg प्रशिक्षण पंजीकरण र प्रयोगकर्ता मार्गनिर्देशन (PDF)
पाठ्यक्रमको लागि दर्ता गर्नुहोस्
तपाईंले केरवेल लर्निal पोर्टलमा प्रोफाइल सिर्जना गरेपछि, तपाईं चयन गर्न र कोर्सको लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईं एक अनलाइन कोर्सको लागि दर्ता गर्नुभयो, तपाईं मोडेलहरू आफ्नै गतिमा पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले पाठ्यक्रम एकैचोटि पूरा गर्नुपर्दैन, र तपाईंको प्रगति तपाईंले पूर्ण गर्ने प्रत्येक मोड्युलसँग बचत हुनेछ।
तपाईंसँग बढि प्रश्नहरू छन्? Carewell SEIU 503 प्रशिक्षण FAQ हरू जाँच गर्नुहोस्।
FAQ हरू हेर्नुहोस्